Foire économique de la Région DIANA - Meva 2017
Nanomboka ny 28 ka hatramin’ny 30 septambra ho avy izao ny Foara ekonomika ho an’ny faritry Diana, izay atao eo anoloan’ny Lapan’ny tanànan’ny Diego-Suarez.
Ity foara ity, izay antsoina ihany koa hoe MEVA 2017 dia karakarain’ny Chambre de Commerce sy ny Indostria avy eto Diego.
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy izay notronin’i Andriamatoa Shabanie Nourdine minisitry varotra, Rolland RATSIRAKA minisitry ny fizahantany, ny minisitry ny serasera Harry Laurent RAHAJASON, ny Solombavambahoaka Jocelyne Maxime sy ny Ben'ny Tanàna eto an-toerana Djavojozara Jean Luc Désiré, hotronin'ireo tompon'andraikitra ambony maro.
vendredi, 29 septembre 2017 14:26
Corruption: Trois personnes wanted
Le Bureau Indépendant Anti-Corruption (Bianco) émet les Avis de recherche contre trois personnes impliquées à des faits de corruption liés à l'exportation illicite d'importante quantité de ressources naturelles dans les régions SAVA et Analanjirofo courant 2014 et 2015.
vendredi, 29 septembre 2017 11:55
Barikadimy Toamasina: Mirehitra ny fiara, mipoaka ny lakirimozenina
Fantatra fa manao fitokonana noho ny resaka vatsim-pianarana sy ny tsy fisian'ny trano honenana ireo mpianatra eto Barikadimy.
Amin'izao dia mirehitra ny fiara iray, ary dia mirefodrefotra ireo baomba mandatsadranomaso alefan'ireo mpitandro ny filaminana izay ao anatin'ny faritra menan'ny Oniversité.
Ny mpanao gazety moa dia hifandritahan'ireo miaramila ny fitaovana fakana sary.
vendredi, 29 septembre 2017 09:16
Aéroport Antalaha: Very ny entan’ny mpandeha
Voatery nozaraina roa ny lavanila an’ity mpandraharaha iray niainga tao amin’ny seranam-piaramanidina Antalaha niazo an’i Mananara Avaratra, fa tsy zakan’ny fiaramanidina indray miaraka.
Lasa niaraka tamin’ny tompony ny ampahany voalohany ny 25 septambra teo. Ny ampitson’io vao tonga tany Mananara Avaratra ny ampahany faharoa, saingy nahabangana ny lavanila.
Tsy nanaiky ilay mpandraharaha, ka naverina tao Antalaha ny entana, ary nitondra ny raharaha teny amin’ny Fitsarana avy hatrany izy. Mpiasa maromaro ao amin’ny Aéroport Antalaha no voasaringotra amin’ity raharaha ity.
vendredi, 29 septembre 2017 09:12
Alaotra Mangoro: Mijoro ny TMH - Tanora Miandrandra ny Ho avy
Napahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny sabotsy 23 septambra lasa teo ny Coach TMH Faritra Alaotra Mangoro sy ny TMH sampana Moramanga.
Tonga maro ny mpikambana ary namaly ny antso ireo mpitarika TMH rehetra taty an-toerana.
Nangataka izy ireo ny hirotsahan'i Filoha Andry Rajoelina amin'ny fifidianana Filoham-pirenena amin'ny 2018 fa vonona ny TMH Moramanga sy ny aty Alaotra ny anohana azy.
Tonga taty an-toerana ihany koa Rafidimanana Desiré izay filoha nasionalin'ny TMH ary tonga nanome voninahitra ihany koa ny Filoha lefitry ny Mapar Augustin Andriamananoro.
Ny TMH moa dia tsy manaiky ny hikitihana izany Lalampanorenana izany.